Manchester United Oo Weli Sugeysa Go'aanka Qandaraas Kordhinta Ee Paul Pogba
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo weli sugeysa go’aanka qandaraas kordhinta ee Paul Pogba
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay weli sugeyso inay ogaato haddii Paul Pogba uu damacsan yahay inuu heshiis cusub u saxiixo Old Trafford.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa qandaraaska uu haatan kula jiro Red Devils wuxuu dhacayaa bisha soo socota ee June, taasoo la micno ah in sida ay hadda tahay uu awoodi doono inuu wadahadalo la yeesho kooxaha shisheeye bisha Janaayo si uu beeca xorta ah ugu wareego.
28 jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah u ah kooxda Ole Gunnar Solskjaer bilowgii ololahan cusub, isagoo gacan ka geystay todobo caawin lix kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay saxafiga reer Talyaani Fabrizio Romano , kooxda 20-ka jeer ku guuleysatay horyaalka Ingariiska ayaan weli ogeyn in ciyaaryahanka khadka dhexe uu mustaqbalkiisa u hibeyn doono kooxda.
Romano ayaa sheeganaya in qandaraasku miiska u saarnaa “bilooyin”, laakiin Pogba weli go’aan kama uusan qaadan inkasta oo uu “jecel yahay jawiga lagu abuuray kooxda bilihii la soo dhaafay”.
Real Madrid , Paris Saint-Germain iyo Juventus ayaa dhamaantood lala xiriiriyay xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka, kaasoo 212 kulan u saftay Man United tartamada oo dhan.
Wakiilka Pogba Mino Raiola ayaa dhawaan sheegay in macmiilkiisa uu ku laaban karo Juventus sannadka dambe.